musha » Products » Solid state fermentors
316L simbi isina tsvina,
Kudzorera kunogona kuiswa
Dzora kumhanya, tembiricha, humidity
Rudzi urwu rwekuvirisa runogona kuiswa mune akasimba Fermentation masystem anosanganisira pharmacy, food, enzymes, biological pesticide uye mamwe maindasitiri, ayo ane mabhenefiti ekuchengetedza mari, yakanaka aseptic performance, yekuchengetedza nharaunda yekushandisa, kugadzirisa kuri nyore uye kusiri nyore-yakasvibiswa nharaunda.
1. Sterilization munzvimbo uye kutonhora. Mota yaive yakananga mune iyo Fermentor, ichibatsirwa neiyo yakakosha nzira inomutsa kuti izadzise chinangwa chekunyurikidza munzvimbo mukupisa kwakanyanya.
2. Kupisa uye humidity control. Tembiricha inoratidza kudzora tembiricha kuburikidza nemhinduro kubva mukushandiswa kwemweya vhoriyamu. Yekunyorovesa kwemagetsi inogashira yakazara atomization yekuzadza mvura sisitimu kuti igadziriswe. Inoculation munzvimbo uye kusanganisa. Kusiyanisa kudzvinyirira munzvimbo uye kunyange kutemera. Mukati mekufetisa, yunifomu uye yakagadzikana Fermentation inoonekwa nekushandisa kusanganisa zvinhu uye yakaputsika system mu tank.
Yakasarudzika solid Fermentation tank inokwanisika kutarisa zvigadzirwa, uye kunze kwekunze kwakachena.
Kudzora paramita: Tembiricha, inomhanya ichimhanya, kunyorova.